Sidee loo daryeelaa ragga gacmaha iyo cagaha | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Is-qurxinta, Daryeelka shaqsiyeed, Caafimaadka
Daryeelka gacmaha iyo lugaha ee ragga ma aha mowduuc ay dad badani ku xaniban yihiin. Waxay umuuqatay arin dumarka ah, laakiin taa waan ognahay taas daryeelka jirka ee rag badan waxay u timaadaa si loo muujiyo muuqaalkooda wax badan. Gacmuhu waa ku dhowaad waxa ugu horreeya ee uu qofku ku qanco oo isku hagaajiyo, lagu daryeelo ciddiyaha la gooyo ayaa go'aamin doona noocyo badan oo ka mid ah qofka naftooda daryeela.
Si tartiib tartiib ah, ragga ayaa ku sii xoogeysanaya daryeelkooda waana wax ay isha ku riyaaqdo oo dareensiiya inay naftooda wanaag ku dareemaan. Inaad gacmahaaga iyo lugahaaga si wanaagsan u labisato waxay muhiim u tahay sameynta aragti wanaagsan. Waxaan bixinay talo ku saabsan sida loo daryeelo timaha, sida loo helo gadh qurux badan, xitaa sii fikradaha ugu fiican ka ilaali wajiyada ragga. Hada talooyinkeena yar ayaa diirada saaraya sida ay tahay inaan u daryeelno cagaha iyo gacmaha.
1 Maxay muhiim u tahay in la daryeelo cagahaaga iyo gacmahaaga?
2 Sida loo sameeyo daryeel gacan
3 Alaabta loogu talagalay qoyaanka gacanta
4 Daryeelka cagaha
5 Alaabooyinka loogu talagalay fuuq-celinta cagaha
Maxay muhiim u tahay in la daryeelo cagahaaga iyo gacmahaaga?
Dad badan, daryeelida qaybtan jirka waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aad ufiican. Had iyo jeer waxaa jiri doona dad badan oo ka mahadceliya inay arkaan qofku markuu daryeelayo qayb muuqata sida gacmaha iyo qayb kale taas waxay u eg tahay inay cararto sida cagaha oo kale.
Isbeddelada xilliyeed ee heerkulka daran ama shaqooyinka rafaaday ragga qaar, waxay ka dhigaan duug iyo ilmo weyn. Waxaad ku arki kartaa gacmahaaga inay ku dhacayaan dildilaacaas ama nabarrada keena qallayl weyn. Cagaha kuleylka leh sidoo kale waxaa ku dhaca raaxo darro weyn iyo culeys badan.
Sida loo sameeyo daryeel gacan
Rag badan durba waxay kuqamaaraan inay aadaan salon qurxinta si ay gacmahooda u daryeelaan. Dabcan, daryeelka gacmaha gudahiisa kuma dareyno ciddiyaha, in kastoo ay jiraan rag badan oo horeyba u doortay inay ku rinjiyeeyaan ciddiyahooda midab aan midab lahayn, oo dayactir leh. Xaaladaha kiisaska ay rabaan inay dhalaalaan, waxay dooran doonaan midabyo gaar ah sida madow, guduud, buluug ama litmus.
A exfoliation qoto dheer oo kaa caawin doonta ka saarida dhamaan unugyada dhintay oo ka saar qaar madaxa madow haddii ay wax jiraan. Haddii ay dhacdo inaadan rumaysanayn, tallaabadani waxay ka caawineysaa dib u cusbooneysiinta maqaarka, si ay u siiso cusub iyo jilicsanaan badan, natiijada ayaa la ogaan doonaa
Mar dambe ayaa ciddiyaha la jarayaa, xaaladaha qaarkood waa lagu nadiifin karaa iyadoo la adeegsanayo feyl. Goobaha la jaro ayaa la saari doonaa oo saliid qoyan ayaa loo marin doonaa goynta si ay u jilciso. Ugu dambeyntii waxay ku dambayn doontaa inay siiso dheecaan aad u wanaagsan gacmaha leh qaybo aad u qaas ah, nasasho, nasteexo iyo bixinta biyahaas oo maqaarku aad ugu baahan yahay.
Alaabta loogu talagalay qoyaanka gacanta
Kareemka gacanta ee Roc wuxuu leeyahay halabuur caawiya soo celinta gacmaha qalalan, si gaar ah loo qaabeeyey si loo siiyo fuuq-bax weyn oo aan gacmaha lagu darin dufan. Waxay dejisaa oo ilaalisaa qoyaanka maqaarka waxaana loo muujiyaa gacmahaas dhibaataysan.
Kareemka gacanta Rickell Men waa shey kale oo sidaas ah Si qoto dheer ayuu u daryeelaa gacmaha ragga. Waa iftiin oo si dhakhso leh ayuu u nuugaa waxaana ku jira taxane ah maaddooyin dabiici ah oo si qoto dheer u qoya una adkeeya maqaarka.
Kiriim Ahava waa kareem macdan ah oo loo sameeyay in lagu daryeelo gacmahaas ay dayaceen cimilada darani ama shaqada qasabka ah. Waxay leedahay awood weyn oo lagu hagaajiyo maqaarka dillaacsan iyo qalalan, oo siinaya dabacsanaan weyn.
Aaggan sidoo kale wuxuu leeyahay daryeelkaas gaarka ah ee inbadan oo naga mid ahi u baahan yihiin. Meelo badan oo xarumo qurux badan ayaa horayba loogu jiray waxaad ku bilaabi kartaa dhowr cagood oo biyo lagu qooyay ilaa 30 daqiiqo oo sug waxyaalaha yaabka leh ee ay ku siin karaan.
Waxay ku bilaaban kartaa duugis jilicsan oo dejinaysa ama ku dhammaan kara, Muhiim ma noqon doonto in la muujiyo cagaha quruxda badan, laakiin jidhkaaga iyo ladnaantaadu way qaddarin doonaan. Ciddiyaha faraha oo dhan waa la jarjarayaa si loo bixiyo muuqaalkaas saxda ah oo nadiif ah.
Maaddaama ay tahay aag u muuqda culeys weyn iyo wasakh marwalba isku day ayaa la samayn doonaa si loo nadiifiyo dhammaan raadadka wasakhda taas ayaa laga heli karaa ciddiyaha dhexdooda. Waxay sidoo kale u gudbi doontaa jar dhammaan maqaarka suurtagalka ah ee ka kooban goyntaas taasi waxay bixisaa muuqaalkaas xun.
Dhamaan maqaarka dhintay iyo wicitaannada qaarkood ayaa laga saari doonaa oo la nadiifin doonaa illaa cagaha ay ka gaarayaan jilicsanaantaas intee la qadarin doonaa. Khabiirka ayaa ku dari kara dhamaadka, jel iyo looshin nasasho leh oo udhaxeysa cagaha iyo anqawyada, waana wax la mahadi doono.
Alaabooyinka loogu talagalay fuuq-celinta cagaha
Cream Organic Shea Foot Cream waxaa lagu sameeyaa subagga shea, fitamiin E, aloe vera iyo saliida marula si cagaha si qoto dheer loogu hagaajiyo. Iyagu waa maaddooyin aasaasi ah oo qiimo sare leh oo hagaajiya wicitaannada qallalan iyo dillaacsan, wicitaannada iyo cidhibta
Kareemka qoyan ee Neutrogena Ultra waxaa loogu talagalay daryeelka cagaha ragga. Waxay ku habboon tahay xitaa maqaarka aadka u qalalan tan iyo qaybaheeda ku saleysan glycerin iyo batroolka jelly waxay gacan ka geysaneysaa in la siiyo dareenkaas degganaanta qoto dheer. Waxay ka kooban tahay Allantoin, waa qayb ka mid ah oo dardargelisa howlaha bogsashada dabiiciga ah ee maqaarka waxayna siisaa jilicsanaan daran.
Dhammaan daryeelladani waxay gacan ka geysan doonaan sidii loo ilaalin lahaa muuqaalka caafimaad badan, diiqad-ka-saar maqaarka, oksijiinta oo abuura wareegga weyn. Waxaan ku raacsanahay in qabashada daryeelkani ay tahay arrin ku saabsan daryeelka caafimaadkaaga iyo waliba gacan ka geysashada kor u qaadida niyaddaada, waad qaddarin doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo daryeelo ragga gacmaha iyo cagaha